भान्सामा औषधि « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
मह र अदुवाको मिश्रण स्वास्थ्यका लागि लाभदायी, जानौँ !
जनस्वास्थ्य सरोकार । प्राचीन समय देखिनै मह र अदुवालाई शरीरका रोगहरु निको बनाउन प्रयोग गरिँदै आएको छ । अदुवा र मह प्रायः सबैको घरमा सहजै उपलब्ध हुन्छ । यसको सेवनले
क्यान्सरबाट जोगिने उपाय त घर घरमै रहेछ ! जानौँ
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । शुरुवातकै अवस्थामा क्यान्सर पत्ता लागेमा यसको उपचार सम्भव छ । स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुका अनुसार, यदि समयमै रहँदै क्यान्सर पत्ता लागेमा आफ्नो खानपानको माध्यमबाट कम गर्न सकिन्छ र
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि मास्क तथा सामाजिक दूरी त अनिवार्य हुँदै हो, शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता अर्थात इम्युनिटी पनि बलियो हुनु जरूरी छ । इम्युनिटी बढाउन
बेसार सेवन गर्दा जान्नैपर्ने पाँच मुख्य कुरा यस्ता छन्
हाम्रो भान्सामा दैनिक रूपमा प्रयोग हुने बेसारमा औषधीय गुण भएको कुरा वैज्ञानिक अध्ययनहरूले पनि देखाएका छन्। कोरोनाभाइरस महामारी फैलिएका बेला शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता सुदृढ बनाउन बेसार सेवन गर्नुपर्ने सुझाव
भिटामिन डीका स्रोत
भिटामिन डीका स्रोत – सूर्यको किरण भिटामिन डीको राम्रो स्रोत हो । सूर्यको प्रकाश छालामा पुगेपछि त्यसले भिटामिन डी पैदा गर्छ । – बिहानको झुल्के घाममा करिब ३० मिनेट बस्नाले
पोसिलो माघे संक्रान्तिः यस्ता छन् तरुल, सखरखण्ड, तिलको लड्डु र चाकुका औषधिय गुण, जानौँ
आज माघे संक्रान्ति अर्थात तरुल, सखरखण्ड, चाकु, खिचडी र कन्दमूल खाएर मनाइने पोसिलो पर्व। माघे संक्रान्तिका समुदायअनुसार आआफ्नै नाम छन्। पहाडतिर माघे संक्रान्ति, थारूहरूले माघी, तराईमा तिला संक्रान्ति, मगरहरूको माघे
यसकारण खानुपर्छ कालो चामल
कालो चामल युरोपेली देशमा अत्यधिक प्रयोग हुन्छ । यस्तो चामल नेपालका सुपरमार्केटहरूमा सजिलै उपलब्ध हुन्छ । र, नेपालको होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा पनि यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ । चीनमा पनि
अकबरे खुर्सानी : ग्याष्ट्रिक तथा अल्सर रोगको औषधि
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । अकबरे अर्थात डल्ले खुर्सानीको नियमित प्रयोगले ग्यास्टिक तथा अल्सर जस्ता रोगको औषधि समेत हुन्छ । यसमा पाइने क्याप्सिसिनका कारण रोगीलाई निकै फाईदा पुग्छ । डल्ले खुर्सानीको
मह सेवनका फाइदा
– मह आयुर्वेदिक औषधिमा पनि प्रयोग हुन्छ । – एन्टिअक्सिडेन्ट्स, भिटामिन, एन्जाइम, क्याल्सियम, आइरन, सोडियम, क्लोरिन, पोटासियमलगायत हाम्रो शरीरलाई आवश्यक तŒव महमा पाउन सकिन्छ । – नियमित मह खाने मानिसमा
उत्कृष्ट शुक्रकिट बनाउन मद्दत गर्ने टमाटर, प्रजनन क्षमतामा वृद्धि
टमाटर एक प्रजातीको फल हो । यसलाई हामी हरेक प्रकारले बनाएर अथवा तरकारीमा हालेर खाने गर्छौ । यसलाई हामी अचारका रुपमा पनि प्रयोग गर्छौं। टमाटरले हाम्रो शरीरलाई निकै फाइदा पुर्याउने